Filtrer les éléments par date : vendredi, 23 novembre 2018
vendredi, 23 novembre 2018 14:35
Morondava: Voasambotra i Borife mpanao « kidnapping »
Tsy navotsotry ry Borife ireo olona nalain’izy ireo an-keriny raha tsy nahazoan’izy ireo 2 tapitrisa Ariary.
Telo mianaka, ka vehivavy mitondra vohoka ny iray ary zaza tsy ampy taona ny iray, no niarahan’ny fira ambany, araka ny fomba filaza ny kidnapping aty Menabe, tao amin’ny Kaominina Tsimazava ny 15 novambra 2018. 20 tapitrisa Ariary no notakian’ireo mpaka ankeriny ho tambin’ny famotsorana azy ireo. Nisy ny fifampiraharahana, naharitra 10 andro, ka tafidina 2 tapitrisa Ariary ary navotsotr’izy ireo izy telo mianaka.
Tsy nipetra-potsiny ny mpitandro ny filaminana, manao fampandriantany amin’iny faritra Menabe, indrindra tany amin’ny manodidina an’i Malaimbandy izay nalaza tamin’ity fira ambany ity. Nahitam-bokany izany, satria voasambotra tany Belo Tsiribihina i Borife izay isan’ny tompon’antoka tamin’ny fakana an-keriny an’izy telo mianaka ireto. Misy namany hafa efa voasambotra ihany koa, ary mbola mitohy ny fandravana ireto tambazotra mpanao ity fira ambany aty Menabe ity.
vendredi, 23 novembre 2018 14:01
PAC: Claudine Razaimamonjy déférée cette après-midi
Dans une affaire de marché public au sein du ministère de la santé, Claudine Razaimamonjy sera déférée au Pôle anti-corruption cette après-midi.
Vato fotsy sy Vato maty: Nitana ny laharana faha 4
Niavaka ity fifidianana filoham-pirenena ity, satria dia maro tokoa ny Vato fotsy sy Vato maty, izay nahatratra 392 853 manerana ny Nosy, raha ny vokatra vonjy maika navoakan'ny CENI hatrany no raisina.
Izy io moa misy dikany samihafa, fa ny lalàna eto amintsika dia mandravona azy ho isa tokana.